ပြက္ခဒိန်တွေ ခေတ်စားခဲ့စဥ်က တစ်နေ့ဝတ်စုံ ၁၂ စုံ လဲဝတ်ရတဲ့အထိ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဇေရဲထက် - Myanmarload
ပြက္ခဒိန်တွေ ခေတ်စားခဲ့စဥ်က တစ်နေ့ဝတ်စုံ ၁၂ စုံ လဲဝတ်ရတဲ့အထိ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဇေရဲထက်
လွန်ခဲ့သော ၁ လ က 18:38 May 27, 2020
ပရိသတ်ကြီးရေ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုများစွာနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ပရိသတ် အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ဇေရဲထက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ သည်းသည်းလှုပ် အားပေးဝန်းရံခြင်းကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ဇေရဲထက်က ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို များစွာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားချောပဲ ဖြစ်ပါတယ်.....။
Photo credit - Zay Ye Htet's facebook account
ဒါ့အပြင် ဇေရဲထက်က ကြော်ငြာတွေနဲ့ photo shooting တွေကိုလည်း ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးကာ ပြက္ခဒိန်တွေကိုလည်း များစွာ ရိုက်ကူးခဲ့သူပါနော်.။ ယခုလက်ရှိမှာတော့ ဇေရဲထက်က အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ သိပ့်မလုပ်ဖြစ်တော့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေနဲ့ အလှမ်းမဝေးရအောင် သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တိုင်းကို တင်ပေးလေ့ရှိသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ။ ယနေ့မှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပြက္ခဒိန် လေးထဲက ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလါတာပါနော်.....။
အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာစဥ်က ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ ချောမောခန့်ညားတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ရင်း " calenderနောက်ဆုံးခေတ် မှီခဲ့ ပျော်စရာ fbတွေပေါလာတော့မှ calenderတွေလည်းကျ ဆင်း ပို့ပေးသောမီးမီးရေကျေးဇူးပါ သိမ်းထားမယ် တနေ့နေ့ရိုတ်ရတာ ဝတ်စုံ အနည်းဆုံး ၁၂စုံ ပျော်စရာ" ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားထားတာကြောင့် ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်. ။ ဇေရဲထက်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြည့်ရှုပြီး ချစ်ပရိသတ်တွေက အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့အုန်းနော်...... ။
Source & Photo credit - Zay Ye Htet's facebook account